Shina kalitao 30ml 1oz 1 Amber tavoahangy feno menaka olitra miaraka amina orinasa Dropper sy mpamatsy | Hoyer
Ny kalitao 30ml 1oz Amber tavoahangy feno menaka miaraka amin'ny Dropper
Fiarovana UV: Ny loko amam-bifotsy amam-borona dia mahatohitra azy, azonao atao ny mametraka ny menaka elaela noho ny tavoahangy mazava. Ary ny akora BPA maimaimpoana sy tsy misy dinika koa dia maharo azy amin'ny 100% ho an'ny ranon-jiro ao anaty tavoahangy, tsy mila mandinika momba ny fihetseham-po na fiarovana ianao.
Weight: 48g / 0,05 pounds
Haavo: 79mm / 3.1 santimetatra
savaivony: 33mm / 1,3 santimetatra
Color: manga, mazava, amber, maitso na hosodoko amin'ny loko hafa azo ekena koa
Fantsom-bazaha lava kokoa: lava noho ny hafa ny halavanay fitaratra, ny halavany amin'ity tavoahangy 30ml ity dia 3.1 santimetatra, mitovy amin'ny haavon'ny tavoahangy ka mety hahatratra ny faran'ny tavoahangy, dia tsy handany ny fitrandrahana solika akory ianao. Azonao atao koa ny manamboatra ny haben'ny dropper raha manana fepetra takiana ianao.
Hazo miloko marevaka: ny ampahany amin'ny fingotra misy antsika dia azo atao amin'ny loko isan-karazany, tsy hoe mainty na fotsy fotsiny, afaka misafidy loko tianao ianao, fa mila mandefa anay Pantone No. ny loko tianao indrindra.
Safidy tsara ho an'ny menaka: Ny boaty Bottle rehetra dia misy fantsom-baravarankely afangaro azo ampiasaina amin'ny tanana, na vatana na tarehy, ary azonao atao ny mameno azy menaka avy any anaty rano rehefa avy namboarina. Azo ampiasaina izany mba hamenoana hafatra, ranom-bolo, menaka manitra, menaka aromaterapy ary rano hafa.
Ny satroka manaporofo: Ny satroka aluminium miaraka amin'ny fingotra dia mifanentana tsara amin'ny tendron'ny kodiarana amin'ny faran'ny tavoahangy, ny sela mihosotra dia afaka miaro ny ranony tsy hianjera mihitsy.
Fitaovana azo atao: azonao atao koa ny misafidy cap plastika misy setela dropper, na cap plastika plastika misy ampidirina ao anatin'io tavoahangy io, hoy i jsut aminay ny zavatra takinao, dia hangataka ny safidy tsara indrindra ho anao izahay.
Size Boky: 30 ml lanja: 48 g Haavony: 79 mm Haavo: 33 mm Boky: 1oz lanja: 0,05 pounds Haavony: 3.1 santimetatra ny halavany: 1,3 santimetatra
Color Amber ny fanaovana pirinty na loko hafa (mazava, manga) dia azo ekena ihany koa
Previous: 10ml Cobalt Blue Glass Rolling tavoahangy anaty tavoahangy miaraka amin'ny Stainless Steel Roller Ball
Manaraka: 4oz 120ml Amber Glass Boston Bottle miaraka amin'ny Sprayer
tavoahangy menaka manan-danja
fitahirizana tavoahangy menaka
Horonan-tsary kobalt manga 10ml amin'ny tavoahangy miaraka amin'i Stai ...
10ml Amber Glass Rolling tavoahangy misy tavoahangy ...
30ml (1oz) Botaly Boston Amber Glass miaraka amin'i Droppe ...